Moe Kai: မေ့မရသော ဖြစ်ရပ်တခု
ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်နဲ.ချီ တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျမ မေ့မရသေးပါ။
အရင်ကျမလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တခုမှာ မန်နေဂျာကြီး တယောက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်မှာ အလွန်အာဏာကြီး သြဇာညောင်းလို. ကျမတို.ရဲ့ ကိစ္စ အတော်များများ သူနဲ.ပဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ရပါတယ်။
တနေ.တော့ အလုပ်မှာ "Reception" ဧည့်ခံ နေရာမှာ လူလိုလို. မန်နေဂျာကြီးကပဲ အလုပ်ခေါ်စာထုပ်၊ လူရွေးပြီး အင်တာဗျူးပြီး အလုပ်ခန်.လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ မိန်းကလေးကို အလုပ်ပေးတော့်မယ်လို. မန်နေဂျာကြီးက ဖုန်းထဲမှာ ကတိပေးပြီးမှ အဲဒီ မိန်းကလေးက ကျမကိုယ်ဝန် လေးလရှိနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ခွင့် ကြိုစီစဉ်ချင်တယ်လို. ပြောပါရော။
ဒီနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် (NHS ဆေးရုံတွေမှာ) Maternatiy Leave ဆိုပြီး လစာပြည့်နဲ. ၆လ။ လစာတဝက်နဲ. ၆လ၊ စုစုပေါင်း ၁၂လ ခွင့်ယူလို.ရပါတယ်။
အဲဒီ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလဲ ကြားရော မန်နေဂျာကြီးက ဒါဆိုတော့ အလုပ်ပေးလို. မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်တဲ့။ မန်နေဂျာကြီးဘက်က စဉ်းစားကြည့်ရင် အလုပ်အသစ်ခန်.တာ အလုပ်မှာ လူလိုလိုပေ့ါ။ ခန်.ပြီးတာနဲ. မကြာခင် ၁နှစ် ခွင့်ပြန်သွားမယ့်လူကို ဘယ်သူခန်.ချင်ပါ့မလဲ။
အမျိုးသမီးက သူ.ကိုယ်ဝန်ကြောင့် အလုပ်မပေးတော့ဘူးလဲ ကြားရော၊ ရှေ.နေငှားပြီး ကိုယ်ဝန်ကြောင့် လူတန်းစားခွဲခြားတာ "Discriminate" လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲပါရော။ အဲလိုနဲ. ကျမတို.ရဲ. ချစ်ကြောက်ရိုသေခဲ့ရတဲ့ မန်နေဂျာကြီး အလုပ်ထွက်သွားရပါတယ်။
ဒီစာရေးဖြစ်တာက လောကမှာ ကိစ္စ အဖြစ်အပျက် အတော်များများဟာ မျက်တမှိတ် လျှက်တပြက် အတွင်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ် သံဝေဂ တရားရစရာပါ။ ကျမ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ပြန်တွေးမိတိုင်း သတိလေးနဲ. နေဖို.၊ ဘုရားတရား မမေ့ဖို.၊ ဘာမဆို နှစ်ခါပြန် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဖို. မကြာခဏ ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်သတိပေးမိတော့တာပါဘဲ။